Kubvunzana naLuis Roso, musiki weInspector Trevejo. | Zvazvino Zvinyorwa
Kutora mifananidzo kubva kuLuis Roso's blog
Tinotanga mwedzi mutsva uyu june kutaura nemumwe wevanyori vane fungidziro huru kwazvo munyika yevatema, Louis rosso. Musiki wemuongorori weMadrid Ernesto trevejo, protagonist yemanovel ake maviri Kunaya kwemvura y Chitubu chine utsinye, tipe mhinduro nemutsa 10 mibvunzo. Asi isu tinoziva zvakare zvishoma nezve basa.
1 Luis Roso ndiani?
2.1 Kwayedza (2016)
2.2 Hutsinye Chitubu (2018)
3 10 mibvunzo
3.0.1 Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
3.0.2 Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
3.0.3 Ndiani munyori wako waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
3.0.4 Ndeupi hunhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
3.0.5 Chero mania kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
3.0.6 Uye yako yaunofarira nzvimbo uye nguva yekuzviita?
3.0.7 Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
3.0.8 Mhando dzako dzaunofarira?
3.0.9 Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
3.0.10 Iwe unofunga sei chiitiko chekutsikisa chiri chevanyori vakawanda sezviripo kana kuti uchida kutsikisa?
Luis Roso ndiani?
Roso akaberekerwa mu Tsika, dunhu reCáceres muna 1988 uye ane degree mu Hispanic uye Chirungu Philology. Zvino shanda se sekondari mudzidzisi kuMadrid, asi paakanga achidzidza aive mushandi uye mushandi wenguva pfupi mumunda. Anofarira zvinyorwa, nhoroondo, cinema nemitambo (kunyanya tsiva).
Kuda kwake nhoroondo kunoratidzwa mune rake basa nemaitiro aro akangwarira. Uye semunyori akafananidzwa naPhilip Kerr kana Eduardo Mendoza nekubata kwake kuseka uye kuseka mumanyorero ake.
Kunaya kwemvura (2016)
Yake yekutanga novel inoiswa muna 1955 uye nyeredzi muongorori Ernest Trevejo, weMapurisa eMadrid. Yakave yakagadzirwa mhosva ina mutaundi mumakomo eMadrid uko dziva riri kuvakwa. Varindi veVanhu vaviri vakashungurudzwa kusvika pakufa uye meya wedunhu nemukadzi wake vakaurayiwa neropa rinotonhora. Tichifunga nezve mukana wekuti mhondi yekuuraya yakasununguka, nyaya yacho yakapihwa Trevejo nekuti inofanirwa kugadziriswa uye nekunyarara nekukurumidza sezvazvinogona.
Chitubu chine utsinye (2018)
Rakadhindwa muna Kukadzi wegore rino uye mushure mekubudirira kwevatsoropodzi nevaverengi veiyo yapfuura, ichi ndicho chiitiko chechipiri chaInspector Ernesto Trevejo. Zvekare yakaiswa muSpain yemakumi mashanu uye mairi Trevejo anotumirwa kuti aongorore nyaya yakaoma yeiyo kufa kwemurume ane zvombo muEl Pardo, padyo padyo nemuzinda unogara Franco. Hazvizivikanwe kana angave ari gandanga kana anopenga, kana kana achinyatsoita tyisidziro.
Bhuku rangu rekutanga raive Zvemwana, comic Mortadelo uye Filemon. Aizove nemakore mashanu kana matanhatu. Ini handirangariri nyaya yekutanga.
Chekutanga handicharangarira. Ndakavhunduka zvikuru Nyeredzi iri kure yeBolaño, asi yatove mukuyaruka.
Ini handina chero zvandinoda, asi zvimwe zvandinoda uye zvandinogara ndichidzokera ku: Borges, Monteroso, Machado o Lorca, semuenzaniso.
Sam de Ishe wemhete.
Leo anenge nguva dzose akarara pasi pamubhedha kana pandinofamba nechitima. Ndinonyorera kombiyuta uye ini chete hobby yangu ndeye gadzirisa zvakawanda, ndoda kunyanyisa, kana ndawana chinyorwa chakapedzwa.
Mumba mangu. Nguva yacho ndipo pandinowana nguva, kazhinji masikati kana mangwanani ndisati ndaenda kubasa.
Ini handifunge kuti pane chero kunyanya. Kune vazhinji vanondipa zvinhu, ndinofungidzira vazhinji ndisingazvizive.
Nhema nhema (pachena), inoverengeka na Zana ramakore rechi20 (saka kazhinji, Spanish uye isiri-Spanish) uye nhoroondo dzeupenyu.
Kuverenga Murume aida imbwanaLeonardo Padura. Ndiri kunyora yangu yechina novel uye kugadzirisa chechitatu.
Ndiye panorama yakazara: kune vanyori vakawandisa, vamwe vehunhu hwakanaka kwazvo, vanokundikana kumira chaizvo nekuda kwemakwikwi akawandisa. Asi zvakare kune mamwe midhiya kupfuura nakare kose kutsikisa: kwete chete vaparidzi vakuru, asiwo vakazvimiririra, kana kunyange kuzvishambadzira paAmazon kana zvimwewo midhiya.
mabviro: Luis Roso's blog.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naLuis Roso, musiki weInspector Trevejo.